Enecuum ဆိုတာဘာလဲ – ThoHi – Medium
Engineer , Core member of Ubuntu Myanmar LoCo Team, Interesting and Contribute in Linux development.
Enecuum အကြောင်းပြောရရင် အမြဲတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ blockchain နည်းပညာ တိုးတက်မှုထဲက idea အသစ်တခု နဲ့ ယနေ့ခေတ် ဖုန်းတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး အကျိုးရှိအောင် ကြိုးစားမှုတခုပါပဲ။
သူ့ရဲ့မူရင်း website ကတော့ https://enecuum.com/ ပါ။ သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့များ telegram app သုံးတဲ့သူဆိုရင် သိချင်တာသွားရောက်မေးမြန်း၊သုံးတဲ့သူအခြင်းခြင်းလဲ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ နောက်တခုကတော့ အသစ်စတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် airdrop လို့ခေါ်တဲ့ အခမဲ့ ငွေတွေ ဖြန့်ဝေခြင်း အစီအစဥ်လဲ ရှိပါတယ်။ ဒီလင့် ကနေ သွားရောက် ထုတ်ယူပါ https://airdrop.enecuum.com/app/signup ။
ဒီပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ဓလေ့တခုက coin or token စတင်ထုတ်ဝေချိန် ဆိုရင် အခမဲ့ ဘယ်လောက်ဝေ ပါမယ် ဆိုပြီး ကြေညာပါတယ်။ သူတို့ လုပ်ခိုင်းတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေတော့ရှိပါတယ်။ social network မှာ ပြန်ရှဲခိုင်းတာတို့ ၊ သူတို့ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာ အမြဲလေ့လာခိုင်းတာတို့ ၊ အခုလို စာတပုဒ်လောက်ရေးပြီး ပြန်ရှင်းပြခိုင်းတာမျိုးတို့ ၊ အတော်စုံပါတယ်။
ဒီ ENQ (Enecuum token) ရဲ့ ထူးခြားချက်ကို ပြန်ပြောရရင် ယနေ့ခေတ် ဖုန်းတွေဟာ အဆင့်မြင့်လာပြီး သိပ်မသုံးဖြစ်တဲ့ ဖုန်းရဲ့စွမ်းရည်တွေကို ဒီ network အတွက် ပေးသုံးတာပါ။ ဒီ့အတွက်လဲ အခကြေးငွေပေးတဲ့ သဘော ဒီ token ပြန်ပေးပါမယ်။ ပြီးမှ လိုချင်တဲ့ ငွေကြေးနဲ့ ပြန်ချိန်းပေါ့။
ဒါကြောင့် ဒီ blockchain network ဟာ စရိတ်သက်သာပြီး မြန်ဆန်မယ်၊ ကွန်ပျူတာ တွက်ချက်မှုကိုလည်း မျှဝေသုံးစွဲတဲ့အတွက် အားလုံးအတွက် အကျိုးရှိမယ် ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပါ။ နည်းပညာ အမြင်နဲ့ကြည့်ရင် အတော်ခက်ခဲမယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ထုတ်လုပ်သူတွေကတော့ သေချာစမ်းသပ်ပြီးမှ ဒီနည်းပညာကို ထုတ်ပြတယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီတော့ ဘီလီယံနဲ့ ချီပြီးရှိနေတဲ့ ဖုန်းတွေသာ အင်တာနက်ဖွင့်ပြီး သူတို့ app ကိုသွင်းပြီး သုံးနေမယ်ဆိုရင် နောက်ကွယ်ကနေ အလုပ်တွေ လုပ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် bitcoin mining လိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဖုန်းကို ဒုက္ခရောက်အောင် ၊ အရမ်းပူလာတဲ့အထိ ခိုင်းတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ ဒီတော့ ဖုန်းလေးဖွင့် app လေးသွင်းထားရင် ညဘက် အိပ်နေရင်တောင် ငွေဝင်စေပါတယ် ဆိုပြီး ကြော်ငြာပါတယ်။ တကယ် ဟုတ် မဟုတ်ကတော့ app ထွက်လာပြီးမှ ဝိုင်းဝန်းစမ်းသပ်ရင်း သိလာမှာပါ။ အတွေးကောင်း တချို့က သိပ်များတဲ့ လူတွေ သုံးစွဲချိန်မှာ အလုပ်လုပ် နိုင်ဖို့ကတော့ တကယ် လူသုံးများမှ သိတာမျိုးပါ။ အခက်အခဲတွေ ဘာဖြစ်မယ် ဆိုတာ ကြိုပြောဖို့ သေချာမသိသေးပါဘူး။
ဒီကုမ္ပဏီက ဘယ်က ငွေပြန်ရှာမလဲ ဆိုရင် blockchain နဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို စရိတ် သက်သက်သာသာနဲ့ လုပ်ချင်တဲ့သူတွေက သူတို့ကို အခကြေးငွေပေးပြီး ဝန်ဆောင်မှုရယူ သုံးစွဲကြတာကနေ ရနိုင်ပါတယ်။ စျေးကြီးတဲ့ ကွန်ပျူတာကြီးတွေနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ လုပ်ငန်းတွေနဲ့ အပြိုင်ဖြစ်လာပါမယ်။ ကားမရှိတဲ့ uber ၊ အိမ်မရှိတဲ့ airbnb လိုပဲ blockchain ဝန်ဆောင်မှုကို လုပ်ဆောင်မယ့် သဘောပါ။
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာတွေနဲ့ စောင့်ကြည့် ပါဝင် ဆင်နွဲသင့်လို့ ဒီလိုရေးသားပြီး အသိပေးလိုက်တာပါ။ နေ့စဥ် အသစ် အသစ်တွေ နဲ့ blockchain ကမ္ဘာကြီးက သင့်ကိုစောင့်ကြိုနေပါတယ်။
ပေးထားတဲ့ လင့်တွေကနေ သွားရောက်လေ့လာပါအုန်းလို့ ထပ်မံ တိုက်တွန်းပါတယ်။ အောင်မြင်ကြပါစေ ခင်ဗျာ။
Never missastory from ThoHi, when you sign up for Medium. Learn more
Never missastory from ThoHi